လူပျို facer A / B / C / D / E ပုလွေသွပ်သွင်းစက် China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:A / B / C / D / E Flute Corrugated Roller,လူပျို Facer မြှောင်းပုံလိပ်,ဖောက်သည်နံပါတ်တပ်ထားသောကတ်ထူပြားလိပ်
Home > ထုတ်ကုန်များ > Corrugating Rolls > လူပျို facer A / B / C / D / E ပုလွေသွပ်သွင်းစက်
လူပျို facer A / B / C / D / E ပုလွေသွပ်သွင်းစက်
ABCDE ပုလွေ တစ်ခုတည်း facrugated roller
Corrugating Rolls သည်စက်မှုလုပ်ငန်းသွပ်သွင်းစက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Chrome Plated Corrugating Roll & Tungsten Carbide Corrugating Roll သို့သွယ်တန်းနိုင်သည်။
မြှောင်းပုံကတ်ထူပြား / တစ်ခုတည်း facer တစ် ဦး က, B, C, D, E ကိုပုလွေမြှောင်းပုံ roller
1. မြှောင်းပုံ roller ၏အချင်းသည် 60260-280mm, 10310mm, 20330mm, 60360mm, 30430mm ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသံမဏိ 48CrMo သို့မဟုတ် tungsten carbide မှပြုလုပ်သည်။ အပူကုသမှုနှင့်အတူ roller ကိုပွတ်တိုက်ပြီး chrome ဖြင့်သုတ်လိမ်းသည်။ ၎င်း၏မျက်နှာပြင်၏မာကျောမှု SH75 အထက်သို့ရောက်ရှိသည်။
2. Corrugated roller ၏မျက်နှာပြင်ကိုကာဗွန်အဖြိုက်နက်ဖြင့်ဖုံးအုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် roller ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးထိရောက်သောကြောင့်သွပ်စက္ကူ၏ကျုံ့မှုအချိုးကိုလျှော့ချပြီးသက်တမ်းရှည်သည်။
Corrugator Belts: Synthetic Corrugator Belts / မြန်နှုန်းမြင့် Corrugator ခါးပတ်များ / အားဖြည့် Edge လဲမှို့ခါများ / ချည် Canvas Conveyor Belts
Hard Chrome သွပ်သွင်းစက် :
သင့်တင့်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုစျေးနှုန်းနှင့်သင့်တင့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ရှာရန် HUATAO မှသင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုစျေးသက်သာ။ လေယာဉ်ဖြင့်လုံခြုံမှုဖြင့်သယ်ယူပါ။ သွင်းကုန်အခွန်လျှော့ချရေးအတွက်ဖောက်သည်များအတွက် [မူရင်း၊ လက်မှတ် [FORM E "၊ [FORM A" နှင့် [FTA] တို့ကိုအခြားတောင်းဆိုမှုများအဖြစ်သင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခြားထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေရန်လည်းသင့်အားကူညီနိုင်သည်။ လိုအပ်ပါကတရုတ်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးပါ။ HUATAO = သင်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။ တရုတ်နှင့်ပူးပေါင်းပါ။
Tungsten Carbide Corrugating Roller အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Chrome Plated Corrugating Roller အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တစ်ခုတည်း Facer စက်များအတွက် Flute Roll အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
A / B / C / D / E Flute Corrugated Roller လူပျို Facer မြှောင်းပုံလိပ် ဖောက်သည်နံပါတ်တပ်ထားသောကတ်ထူပြားလိပ် Flute Corrugator Roller Chrome Corrugated Roller Tungsten Carbide Corrugated Roller အီး Flute Corrugating Roll corrugated roller